novembre 2017 - Page 2 sur 85 -
Zandarimariam-pirenena : Hentitra ny baiko momba ny fitondran-tena
Araka ny nambaran’ny Jeneraly Tsirivelo Nicolas, talen’ny kabinetra eo anivon’ny zandarimaria, izay nanatanteraka ny fidinana ifotony tany amin’ny faritra Vatovavy Fitovinanany nandritry ny fanaovana jery todika amin’ny fampiharana ny fitondran-tena, sy ny toe-tsaina amin’ny fampandriana …Tohiny
Mpandraharahan’ny solika : Maka tombony mihoa-pampana
Taorian’ny fanadihadiana izay nampanaovin’ny minisiteran’ny Angovo sy ny fanjakana foibe eo amin’ny tombony izay alain’ ireo mpandraharahan’ny solika, dia fantatra izao fa mihoa-pampana ny tombony izay alain’ izy ireo. Ankilany anefa dia tsy nanaiky izany …Tohiny
Zandarimariam-pirenena : Hofehezina ny lafin-tany falehan’ireo dahalo
Tsy mitsaha-mitady vahaolana amin’ny hisian’ny fandriam-pahalemana eto Madagasikara ny Fitondram-panjakana, indrindra fa amin’ny asan-dahalo amin’ny ankapobeny. Araka izany, dia nanatanteraka atrikasa hametrahana paikady hiadiana amin’ny tsy fandriam-pahalemana sy ny ady amin’ny asan-dahalo ny teo anivon’ny …Tohiny
Andohatapenaka : Lehilahy iray maty tanaty trano fandihizana
Lehilahy iray indray no voalaza fa maty nandritry ny fanatrehana lanonana teny Andohatapenaka ny alin’ny 25janoary 2017 lasa teo. Nisy tsy fifankahazoana teo amin’ izy ireo, ka raikitra ny hetraketraka izay miaro vono sy ratra …Tohiny
Tsy honohono. Nanomboka ny voalohandohan’ny volana desambra teo ny asa fanamboarana sy fananganana kianja mitafo maoderina ao Antsirabe, eny amin’ny Vatofotsy. Fotodrafitrasa maoderina tafiditra indrindra amin’ny tetikasan’ny Filoham-pirenena izany. Araka ny fampitam-baovao, ny kaominina Ambonivohitr’Antsirabe ...Tohiny